मृगौलामा भएको पत्थरीलाइ कसरी घरेलु उपायद्वारा हटाउन सकिन्छ ? | BeniOnline.com.np जिल्लाका ताजा अनलाइन समाचार
Home स्वास्थ्य मृगौलामा भएको पत्थरीलाइ कसरी घरेलु उपायद्वारा हटाउन सकिन्छ ?
२०७६, २१ भाद्र शनिबार १४:१४
खानपीनमा ध्यान नदिँदा धेरैलाई मृगौलामा पत्थरीको समस्याले सताउने गर्छ । मृगौलामा पत्थरी भइसकेको छ अथवा हुने जोखिम छ भने प्रशस्त पानी पिउनुपर्छ । पानी प्रशस्त पिउने गर्नाले पत्थरी बन्ने खनिज पदार्थ शरीरबाट पिसावमार्फत जान्छ।
आज हामी मृगौलामा भएको पत्थरी हटाउने घरेलु उपायको बारेमा तपाईलाई जानकारी दिन गईरहेका छौँ । घरमा नै पाईने सामाग्री सही तरिकाले प्रयोग गर्ने हो भने यो समस्याको जोखिमबाट बच्छौँ ।
यी खानेकुराकाे सेवन गर्नाले मृगौलामा भएको पत्थरी हटाउ सहयाेग पुग्दछ
कागतीको रसमा जैतुनको तेल मिसाएर पिउने र त्यसलगत्तै पानी पिउने गर्नाले साना स्टोन फुटेर पिसाबमार्फत निस्किन्छ ।
अनारको जुस पनि किड्नीमा हुने स्टोन हटाउनको लागि लाभदायक मानिन्छ । अनारको जुसमा किड्नी स्टोन हराउने तत्व पाईन्छ । त्यसैले किड्नीमा स्टोन भएकाहरुले दिनमा एक अथवा दुई ग्लास अनारको जुस खाने गर्नु उत्तम हुन्छ ।
राजमामा फाइबर, वनस्पतिक प्रोटिन, भिटामिन बी र मनरल्स पाइन्छ, जसले पिसाब नलीलाई सफा गर्न र किड्नीलाई सफा गर्न मद्दत गर्छ । साथै यसले किड्नी स्टोन बन्ने र बढ्ने क्रमलाई पनि रोक्छ ।
किड्नीलाई स्वस्थ राख्न दिनहुँ तुलसी चिया पिउने गर्नु लाभदायक हुन्छ । एक चम्चा तुलसीको पातको रस र मह एकसाथ पिउनुपर्छ । यसरी लगातार ६ महिनासम्म तुलसीको रस र मह मिसाएर खाँदा पथरी निस्किन्छ ।
चकलेट, चुकन्दर, स्ट्रबेरी, ओखर, मरिच, पालक, कुरिलो जस्ता खानाले स्टोन बढाउने भएकाले यस्तो खाने कुराहरु नखानु उत्तम हुन्छ।
तुलसी औषधीय गुण भएको बहुउपयोगी वनस्पति हो । यो हरेक रोगका लागि उत्तिकै उपयोगी छ । आयुर्वेदमा समेत तुलसीलाई विभिन्न रोगको अचुक औषधिका रूपमा लिइएको छ । यसैकारण धार्मिक मान्यताअनुसार तुलसीलाई भगवान् विष्णुको रूपमा लिइने गरिएको विज्ञहरूको तर्क छ ।
त्यसैले त घरघरमा ‘तुलसीको मठ’ बनाएर तुलसीको पूजा गर्ने चलन बसेको हो । खासमा तुलसी पाँच प्रकारका छन । यद्यपि, श्याम र श्वेत नामक तुलसी प्रायः जताततै पाइन्छ । यी दुई तुलसी स्वास्थ्यका दृष्टिले एकदमै फाइदाजनक छन ।
– अक्सर जाडोमा हुने रुघाखोकी, निमोनिया, ब्राेंक्राइटिस, घाँटीको समस्या र श्वास–प्रश्वासमा हुने समस्या आदिका लागि तुलसीको पात लाभदायी हुन्छ ।
– पेटको समस्या, श्वास गन्हाउने, यौनजन्य रोग, घाउ–खटिरा, बान्ता हुने, उच्च रक्तचापजस्ता रोगका लागि तुलसी एक अचुक औषधि हो।
अनारलाई सदियौंदेखि औषधिका रुपमा लिने गरिएको छ । नेपाली समाजमा हेर्ने हो भने, बिरामी भेट्न जाँदा लाने कोसेलीमा अनार पहिलो स्थानमै आउँछ । वैज्ञानिक ज्ञानको अभावमै भए पनि नेपालीहरुमाझ चलिआएको यो चलन धेरै हदसम्म सकारात्मक छ ।
हालै भइरहेका विभिन्न वैज्ञानिक अनुसन्धानले अनारलाई ब्याक्टेरिया विनासक, भाइरस बिनासक र फंगी (ढुसी र त्यस्तै प्रजातिहरू) बिनासकका रुपमा साबित गरिसकेको छ । साधारणतया अनारको सबै भाग (फल, जरा, बोक्रा, फूल) औषधिका रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसमा पाइने अनेक तत्वले विभिन्न प्रकारका रोग निवारणमा मद्दत गर्न सक्छ ।
अनारमा प्रचूर मात्रामा विभिन्न थरिका एन्टिअक्सिडेन्ट हुने भएकाले यसले प्रोस्टेट, स्तन क्यान्सर लगायत विभिन्न प्रकारको क्यान्सर हुनबाट बचाउन सक्छ । त्यस्तै, क्यान्सर बन्ने तरिकामा बाधा ल्याउनुका साथै बनिसकेको ट्युमरको बिनास गर्न पनि मद्दत गर्छ।
अनारलाई मुटुको सहयोगीका रुपमा लिन सकिन्छ । यसमा मुटुलाई असर गर्ने कोलेस्टेरोल हुँदैन । साथै शरीरमा रहेको नराम्रो कोलेस्टेरोलाई मुटुमा हानी गर्न नसक्ने बनाउन पनि यसले भूमिका खेल्छ । त्यस्तै, अनारले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउनुका साथै रगत सञ्चालन सहज गराउने भएकाले मुटु रोगको जोखिम घटाउँछ ।
अनारमा पाइने ‘फ्लाभेनोल’ भन्ने तत्वले हड्डी खिइने समस्या घटाउनुका साथै बाथ रोगबाट बचाउन सक्ने वैज्ञानिकहरुको दाबी छ । यद्दपि यसमा पर्याप्त मात्रामा अध्ययन भने भएको छैन ।
अनार भन्ने बित्तिकै चिनी रोगीले खानु हुँदैन भन्ने बुझाइ छ । तर, अनारमा चिनीका साथै फाइबर (रेशा) र एन्टिअक्सिडेन्ट पनि प्रसस्त मात्रामा हुने भएकाले रगतमा चिनीको मात्रा सुस्त मात्रामा बढाउने विश्वास गरिन्छ । अनारले चिनीरोगसँगै देखापर्ने अन्य समस्याको निराकरणमा पनि मद्दत गर्ने भएकाले चिनीरोग हुँदा अनार खानु राम्रो मानिन्छ ।
चिनीरोगीले एकपटक डाक्टर अथवा डाइटिसियनको सल्लाहमा कति मात्रामा अनार खाने भन्ने निर्धारण गर्नु वुद्धिमानी हुन्छ । त्यसैगरी, अनार खाँदा जुसको सट्टा दाना खानु उपयुक्त हुन्छ । यदि जुस खानु पर्ने बिरामी भए घरमै सफासँग बनाएको जुस खानु राम्रो हो । बजारिया जुसमा चिनीको मात्रा अधिक हुन्छ ।
अनारले मस्तिष्कलाई आवश्यक पोषक तत्व प्रदान गर्ने भएकाले अल्जाइमर रोग लाग्नबाट बचाउनुका साथै दिमाग तेजिलो बनाउन मद्दत गर्छ ।
अनारमा पाइने भिटामिन सी सँगसँगै अन्य एन्टिअक्सिडेन्टले छाला सुन्दर राख्न मद्दत गर्छ।यसका अलावा अनारको बोक्रामा पाइने तत्वहरुले दाँतको समस्या हटाउन मद्दत गर्छ ।
साथै, विभिन्न रोगीमा ब्याक्टेरिया र फंगीको विकाश हुन नदिएर थप समस्या बढ्न दिँदैन । यसका लागि अनारको बोक्रालाई सुकाएर धुलो पारेर खान सकिन्छ ।
साधराणतया कोलेस्टेरोल घटाउने औषधिहरु, रक्तचापको औषधि र मिर्गौला सम्बन्धी रोगमा प्रयोग हुने केही औषधि सेवन गर्नुपर्दा डाक्टरको सल्लाह दिनुपर्छ । त्यसैगरी, रगत पातलो गर्ने औषधि (वार्फारिन) प्रयोग गरेको खण्डमा पनि अनारको प्रयोग चिकित्सकको सल्लाहमा गर्नुपर्छ ।
साथै तपाईलाई यो जानकारी कस्तो लाग्यो ? हाम्रो जानकारीहरु अरुलाई पनि देखाउन कृपया सेयर गर्नुहोला । तपाइको एक सेयरले थाहा नभएकाहरुले ज्ञान पाउछन भने हामीलाई पनि सहयोग मिल्नेछ । Source: www.mygyanbigyan.com
Previous articleयस्ता काम गरे आँखाको शक्ती बढाउन सकिन्छ, जान्नुहाेस्
Next articleयाद गर्नुहाेस् ! मुटु रोगको यस्ताे खतरनाक लक्षण देखिए तुरुन्तै ज्यान जान सक्छ